Ngokuhlanganiswa okuningi kwamathuluzi kumasistimu amaningi wokuphathwa kokuqukethwe, sibona amaklayenti ethu amaningi enezinkinga ngemibhalo yeGoogle Analytics efakwa ekhasini kaningi. Lokhu kudala umonakalo ku analytics, okuholele ekubikeni okukhulu ngokweqile kwezivakashi, amakhasi ngokuvakasha ngakunye futhi kungabi nesilinganiso sokuncipha
I-Google Analytics isebenza ngokulayisha iskripthi esihlanganisa lonke ulwazi, sigcine imininingwane kuma-cookies wesiphequluli bese siyithumela kumaseva we-Google ngesicelo sesithombe. Lapho iskripthi silayishwa ngaphezu kwesisodwa, kwesinye isikhathi sibhala ngaphezulu amakhukhi, bese sithumela izicelo eziningi zesithombe kuseva. Kungakho ifayili le- izinga lokunciphisa liphansi kakhulu… uma uvakashela amakhasi angaphezu kwelilodwa kusayithi, awugadli. Ngakho-ke… uma imibhalo idubula ngaphezu kwesisodwa lapho uvakashela ikhasi elilodwa, kusho ukuthi uvakashele amakhasi amaningi.